Android-x86 yakazivisa yekutanga preview vhezheni ye Android 9 | Linux Vakapindwa muropa
Ivo vanogadzira chirongwa Android-x86, umo munharaunda yakazvimiririra iri kuvandudza iyo Android chikuva chiteshi che x86 yekuvakisa, Ivo vakaburitsa pre-kuvaka vhezheni yakavakirwa pane Android 9 chikuva. Uku kuburitswa kwekutanga kunosanganisira kugadzirisa uye kuwedzerwa kunovandudza mashandiro eApple pane x86 dhizaini.
Kune avo vachiri kusaziva nezve chirongwa ichi, ndinogona kukuudza izvozvo Android-x86 chirongwa chisina kukodzera che nhare yekushandisa Android kubva kuGoogle kumhanya pane zvishandiso zvine x86 processor kubva ku AMD neIntel, pachinzvimbo cheARM RISC machipisi.
Iyo purojekiti yakatanga senge dzakateedzana zvigamba kune iyo Android sosi kodhi kuitira kuti igone kumhanya pamhando dzakasiyana dzemabhuku uye e-Ultra-maPC, kunyanya iyo ASUS Eee PC.
Uye nekufamba kwenguva, chirongwa ichi chakagadzira vateveri uye chakawana mukurumbira iyo ine nharaunda diki yevashandisi.
1 Main nyowani maficha e = Android x86 9 Pie
2 Nyaya dzinozivikanwa
3 Dhawunirodha uye edza Android x86 9 Pie
Main nyowani maficha e = Android x86 9 Pie
Kubva kune chaiwo matsva ekuumbwa uku, iyo Mesa 19.0.8 rutsigiro rwekushandisa kutsigira OpenGL ES 3.x na Hardware mifananidzo yekumhanyisa yeIntel, AMD uye NVIDIA GPUs, pamwe nemuchina chaiwo QEMU (virgl).
Iyo 64-bit uye 32-bit inovaka yeiyi preview vhezheni ye Android 9 inosvika ne Linux kernel 4.19 uye nzvimbo yemushandisi nzvimbo.
Kune avo chikamu, ivo vanogadzira vakashanda pakukwanisa boot kuEFI masisitimu uye kugona kuisa kune diski kana uchishandisa UEFI.
Zvakare neiyo Hardware inowedzera codec rutsigiro rweIntel HD uye G45 mifananidzo machipisi, rutsigiro rwemusoro we bootloader muGRUB-EFI, tsigiro yemazhinji-kubata, makadhi ezwi, Wifi, Bluetooth, sensors, makamera uye Ethernet (DHCP kumisikidza).
Uye rutsigiro rwemultimode FreeForm yekupa panguva imwe chete basa nemaapplication akawanda. Kubvira kwekumisikidza kumisikidza uye kuyera kwema windows pachiratidziri.
Imwe shanduko huru kubva pakuvaka uku kushandiswa kweSwiftShader kupa OpenGL ES 3.0 software yeasina kutsigirwa vhidhiyo masisitimu.
Pamusoro pekupihwa imwe nzira inowanikwa yezvirongwa zvinoshandisa bharaki rebasa .
Yeimwe shanduko zvinomira pachena tinogona kuwana:
Kuvapo kweinopindirana inosimudza iyo inoshanda mune zvinyorwa mode.
Otomatiki kumisikidza kwekunze kwe USB madhiraivha uye SD makadhi.
Iyo ForceDefaultOrientation sarudzo inogoneswa nemaoko kugadzirisa iko kutaridzika kwechidzitiro pane zvishandiso pasina yakakodzera sensor.
Zvirongwa zvakagadzirirwa mufananidzo wemifananidzo zvinogona kuratidzwa nemazvo pamidziyo ine chidzitiro chenzvimbo pasina kutenderedza chishandiso.
Iko kugona kumhanyisa manyorerwo akavakirwa iyo ARM chikuva mune x86 nharaunda kuburikidza nekushandisa yakakosha dura.
Tsigiro yeasina kufanira kuburitswa.
Ongororo yekuyedza yeiyo Vulkan mifananidzo API yeiyo nyowani Intel uye AMD GPUs.
Iko kugona kutevedzera isina waya isina adapta kana uchishanda pamusoro peEthernet (yekuenderana neWiFi-yakabatana kunyorera).
Mouse rutsigiro pakutanga pa VirtualBox, QEMU, VMware, uye Hyper-V chaiwo michina.
Iyo Google Play sevhisi inogona dzimwe nguva kupunzika pane iyo 32-bit mufananidzo.
Simisa uye tangazve haishande pane mamwe majaira.
Iyo Nvidia (nouveau) GPU inogona kuturika dzimwe nguva.
VMware 3D rutsigiro rwatyoka. (chete isiri-yekumhanyisa maitiro inoshanda)
Kutora mifananidzo hakushande kana Vulkan inogoneswa.
Dhawunirodha uye edza Android x86 9 Pie
Kuti utore iyi preview system Iwe unogona kuenda wakananga kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uko iwe kwaunogona kuwana iyo system mufananidzo mune yayo yekurodha chikamu.Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Android-x86 9 Universal Live Versions ye x86 32-bit (719 Mb) uye x86_64 (909 Mb) maumbirwo akakodzera kushandiswa pama laptops akajairwa uye mapiritsi akagadzirira kurodha pasi.
Iwe unogona kusevha iyo mufananidzo nerubatsiro rweEtcher pane USB. Chii chimwe, rpm mapakeji akagadzirirwa kuisa iyo Android nharaunda pane kugoverwa kweLinux.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ruzivo rwechiziviso cheichi chekutanga shanduro yekutanga, unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Android-x86 yakazivisa yekutanga preview vhezheni ye Android 9